Somali News 2.28.22
Published March 1, 2022 at 10:26 AM CST
Cisbitaalada COVID-19 iyo kiisasku waxay ku sii socdaan inay hoos ugu sii dhacayaan Nebraska ka dib markii ugu sarraysay bishii hore, saraakiisha caafimaadka ee gobolkuna waxay rajo ka qabaan inay sii fiicnaan doonaan xagaaga. Madaxa Caafimaadka ee Nebraska ayaa sheegay in dadku ay bilaabi karaan inay ka fikiraan "ku soo laabashada sidii hore."
Tirooyinka soo hagaagaya ayaa nafis u ah isbitaallada gobolka ee lagu riixay xadka markii isbitaallada la dhigay ay sare u kaceen ilaa 767 bil ka hor. Tiradaas ayaa si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacday tan iyo markaas, iyadoo garaacday 279 Axaddii.
Magaalada Sioux waxay aragtay koror 4% ah guud ahaan dambiyada rabshadaha wata sanadkii hore marka loo eego sanadkii ka horeeyay. Tani sida lagu sheegay warbixin horudhac ah oo ku saabsan dambiyada oo ay soo saartay waaxda booliiska Isniintii.
Xogtu waxay muujinaysaa 423 dambiyo rabshado wata, oo ay ku jiraan in ka badan 300 oo weerarro daran.
Dilalka ayaa hoos uga dhacay lix ilaa afar. Dhaca ayaa sidoo kale hoos uga dhacday 75 2020 ilaa 52 2021.
Barasaabka Iowa Kim Reynolds ayaa qaaday tallaabo uu ku muujinayo midnimada dadka Ukraine. Maanta, waxay amar ku bixisay hay'adda dawladda ee dusha kala socota iibinta khamriga jumlada ah in aanay mar dambe ka iibsan wax soo saarka Ruushka.
Iowa waa mid ka mid ah 17 dawladood oo gacanta ku haya iibinta khamriga khamriga heer jumlo.
Reynolds wuxuu yidhi "tani waxay muujinaysaa taageerada Iowa ay la leedahay dadka geesiyaasha ah ee Ukraine si ay u difaacaan xoriyadooda ka dhanka ah macangaganimada Putin."
Aqalka South Dakota ee Jamhuuriga ayaa diiday soo jeedinta sharciyaynta dheriga madadaalada ee dadka waaweyn taas oo dhabarjab weyn ku ah sharciga ujeeddadiisu tahay in lagu ixtiraamo rabitaanka codbixiyayaasha. Hindise sharciyeedka la tuuray Isniintii ayaa si dirqi ah u meel mariyay golaha senate-ka ee Jamhuurigu gacanta ku hayaan todobaadkii hore. Sharci-dajiyayaashu waxay ku sababeeyeen inay tahay inay isku dayaan inay ka horreeyaan ololaha lagu soo celinayo marijuana madadaalada codbixinta Noofembar.